ရွှေမန်းကိုကိုအမှုမှ ခေါင်းဆောင်ဟုယူဆရသူ လွတ်မြောက်နေဆဲ – fake Shwe Mann Ko Ko? | MoeMaKa Burmese News & Media
မင်းလတ်ရဲခေါင်ရေးသားတဲ့ စနေနေ့သတ်ဖြတ်မှုကြီး စာအုပ် ပြန်လည်ထွက်ရှိ
စာရေးဆရာ ဇာဂနာ ၏ “ ဘာမှမသိရပါဘူး ” စာအုပ်သစ်ထွက်ရှိ
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) ● မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှ အမေ့ခံ မိခင်များ
မောင်မောင်စိုး - ပျောက်ကြားဒေသနှင့် အပစ်ရပ်မျဉ်း
ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ်
ကဗျာဆရာ အောင်ဘညို ကွယ်လွန်ခြင်း ၃ နှစ်ပြည့် မန္တလေးမှာ ပြုလုပ်မယ်
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) - အစိုးရဖွဲ့ရုံနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို အပြည့်အဝရမလား (အင်တာဗျူး)
တူမောင်ညို - အုပ်စိုးသူတွေအတွက် “သီတဂူစန်းလ” - ပြည်သူတွေအတွက် “ကန္တာရနွေနေပူ”
လောအယ်စိုး – ဧရာဝတီ၏ ရေစီးသံများ (ဓာတ်ပုံအက်ဆေး) (၇)
Join 88,246 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month July 2018 (133) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
Cartoon Box (3,524)
ရွှေမန်းကိုကိုအမှုမှ ခေါင်းဆောင်ဟုယူဆရသူ လွတ်မြောက်နေဆဲ – fake Shwe Mann Ko Ko?
The Street View ဂျာနယ်
ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂
ရွှေမန်းကိုကို (သူရဦးရွှေမန်း၏သမီး အဖြစ် အယောင်ဆောင်သည်ဟု ဆိုသူ)၊ အေးအေးမာ၊ ရဲအောင် တို့ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးစဉ်က တွေ့ရပုံ။ ရွှေမန်းကိုကို တဦးတည်းသာ အဖမ်းခံနေရသည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း၏ သမီးဖြစ်သူ အဖြစ် ဟန်ဆောင်လိမ်လည်နေသူ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးရမိထားသော်လည်း အဆိုပါ လိမ်လည်မှုများအား အဓိက ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားသူ ရဲအောင်(ခ)ရဲဇော်အောင် နှင့် အပေါင်းအပါများ လွတ်မြောက်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ရွှေမန်းကိုကို ဟု လိမ်လည်နေခဲ့သော မ ရွှေမန်းကိုကို (ခ) မြင့်သူဇာခိုင် (ခ) ငယ်လေး}အား ကမာရွတ်ရဲစခန်းမှာ (ပ)၂၇၃၊၁၂ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(၁) ၅(၃) ဖြင့်၎င်း နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား အတုပြုလုပ်မှု (ပ) ၂၇၁ ၊၁၂ ပုဒ်မ ပုဒ်မ၄၂၀၊၄၆၈ တို့ဖြင့် ဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့တို့တွင် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
သူရဦးရွှေမန်းဧ။် သားသမီးဖြစ် အရောင်ဆောင်၍ လိမ်လည်မှုများတွင် ဒေါက်တာ ရွှေမန်းကိုကို ဟု အယောင်ဆောင်မှုမှာ တစ်ချို့နေရာများတွင် သားဖြစ်သူဟန်ဆောင် ပြီး တစ်ချိူ့နေရာများတွင် သမီးဖြစ် ဟန်ဆောင်လေ့ရှိကြောင်း အဆိုပါကဲ့သို့ လိမ်လည်မှုများမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းခန့်ကပင် လိမ်မှုခံခဲ့ရသူများ ရှိခဲကြောင်း အလိမ်ခံခဲ့ရသူ အချို့ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
အဆိုပါ လိမ်လည်မှုများအား အဓိက ဦးဆောင်သူ ရဲအောင်(ခ) ရဲဇော်အောင် မှာ၎င်းတို့အဖွဲ့အား(long life) ဟု အမည်ပေးထားပြီး ၄င်းကိုယ်တိုင်ပင် သူရဦးရွှေမန်း၏ သားဖြစ်ဟန် အယောင်ဆောင်၍ လိမ်လည်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ရွှေမန်းကိုကို ဟူ၍ အယောင်ဆောင်လိမ်လည်မှုများ တွင် ပါဝင်ခဲ့သူများ တွင် ရွှေမန်းကိုကို(ခ)မြင့်သူဇာခိုင်သာ ဖမ်းမိထားပြီး ကျန်ရှိသူများ လွတ်မြောက်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မောင်ကြူးရင့် – ထင်ရူးပင်ရိပ် နှစ်ငါးဆယ် https://t.co/S7C1sMh5Db https://t.co/yfJ7q0TzeD about4hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလှေနဲ့ ဒီလူတွေ … https://t.co/Rca3MRL1yy https://t.co/SfdfIOaYU2 about6hours ago ReplyRetweetFavorite
ဥက္ကာကျော် ● ပိုးလမ်းကြီးပေါ်က ငြိမ်းချမ်းရေးကြေညာစာတမ်း https://t.co/7OpGLQURwM https://t.co/19siWXV2ge about6hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်ရစ် – ၁၉၈၉ ဇူလိုင် ၁၉ … တခုသော အာဇာနည်နေ့… https://t.co/98ahCVhun1 https://t.co/OjeSy5KxK1 about 12 hours ago ReplyRetweetFavorite
အောင်ကိုကိုလတ် (တမူး) – ဇူလိုင် ၁၉ https://t.co/ut0eFhDBEB https://t.co/bOwMUfi8l9 about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite